Fifidianana 2018 : Be mpanakiana ny Ceni -
AccueilSongandinaFifidianana 2018 : Be mpanakiana ny Ceni
Tsy mampandry saina. Hatreto, mbola maro ireo mametraka ny ahiahiny amin’ny fomba fiasan’ny komity mpanomana sy mpikarakara fifidianana (Ceni), raha tsy hilaza afa-tsy ny firaisan’ireo kandidà sy ireo antoko politika samihafa.
Tsy misy afa-tsy fanakianana tokoa mantsy no asetrin’ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena akehitriny. Ao no mitaky ny fanokafana ny lisi-pifidianana, ary tonga hatrany amin’ny fangatahana fanemorana ny fifidianana, izay tanterahina araka ny daty voatondro, ny 7 novambra izao ny fihodinana voalohany, ary ny 19 desambra ny fihodinana faharoa.
Voalaza mantsy fa misy tsy mazava ny firafitry ny lisi-pifidianana, ary tokony hosokafana. Ao koa ny milaza fa be hosoka loatra amin’ny alalan’ny fiverenana anaran’olona in-droa na in-telo, sy ny anaran’olona efa nodimandry no mbola tafiditra anatin’io lisitra hiatrehana fifidianana io.
Ireo rafitra iraisam-pirenena, toa ny Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), izao efa nanambara sy nahatsikaritra ny fisian’ny tsy fahatomombanana eo anivon’ny lisi-pifidianana, sns. Teo ihany koa, vao tsy ela akory izay, ny zoma 19 oktobra teo, no nanakianan’ireo kandidà ho Filoham-pirenena ny Ceni mahakasika ny kara-pifidianana.
Toa raisin’ny eo anivon’ny Ceni ho vita mora fotsiny ihany izany, ka nandrosoany vahaolana ny amin’ny tokony hanovana ny kara-pifidianana ho “biométrique”.
Hevitra antaingina, ary toa manamoramora zavatra fotsiny ihany anefa ny Ceni amin’izany tolo-kevitra izany. Ny tetibolan’izy ireo hoenti-manatanteraka fifidianana aza mbola tsy feno, nefa dia any amina zavatra tsy azo heverina indray no lazaina. Raha nihevitra izany izy ireo, naninona no tsy nofaritany tao anatin’ny tetibolan’izy ireo izany? Andrasana kosa ny mety ho fivoarana sy fanentsenana izany lesoka rehetra izany.